८० बर्षअघि लोप भएको जीवलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास- रोचक - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — बैज्ञानिकहरु एउटा दुरुह लाग्ने काममा लागेका छन् । सन् १९३० मा विश्व बाटै लोप भएर गएको तस्मानियन टाइगरलाई वैज्ञानिकहरुले नयाँ जीवन दिन खोजेका छन् । झट्ट सुन्दा यो कुनै हलिउड फिल्मको कथा जस्तो लाग्छ, जहाँ लोप भएर गएको जीवलाई ‘क्लोनिङ’गरेर नयाँ जीवन दिइन्छ ।
जुरासिकपार्क डट वीकी डट कम ।
संसारबाटै लोप भएर गएको जनवारलाई पुन: नयाँ जीवन दिन सकिएला ? त्यसैलाई उत्पति गराउन सकिएला ?
बैज्ञानिकहरु त्यही दुरुह लाग्ने काममा लागेका छन् । सन् १९३० मा विश्व बाटै लोप भएर गएको तस्मानियन टाइगरलाई वैज्ञानिकहरुले नयाँ जीवन दिन खोजेका छन् । थ्यालिसाइनाडे प्रजातिको यो जीवको डिएनएलाई क्लोनिङ गराएर पृथ्वीबाट लोप भइसकेको यो जीवको नयाँ अवतार दिन लागिएको हो । झट्ट सुन्दा यो कुनै हलिउड फिल्मको कथा जस्तो लाग्छ, जहाँ लोप भएर गएको जीवलाई ‘क्लोनिङ’गरेर नयाँ जीवन दिइन्छ ।
संसारबाटै लोप भएर गएको जीवलाई पुन:नयाँ ढंगबाट निर्माण गर्नु कतिको नैतिकता हो ? के मानिस अब भगवान् जस्तै भएको हो त ? यो प्रश्नले अहिले चर्चा पाउन थालेको छ ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो हिंस्रक ब्वाँसाको रुपमा चिनिने यो तस्मानियन टाइगर अष्ट्रेलिया, तास्मानिया, न्यू गिनियाबाट सन् १९३० दशकमा लोप भएको थियो । करिब चार हजारभन्दा बढि रिर्पोटले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । यो जीवलाई थ्यालिसन पनि भनिन्छ । वैज्ञानिकहरुसँग प्राप्त प्रमाणका अनुसार यो जीव लाजालू स्वभाव र यो कुकुरको जस्तै आकार भएको जीव हो । यो जीवको स्टिफ्ड टेल र कंगारोको जस्तै पेट हुन्छ । यो जीवमा माथिदेखि तलसम्म कालो टाटाहरु हुन्छन् ।
यदि थ्यालिसिनको जीवको जीनलाई क्लोनिङ गर्ने क्रममा वैज्ञानिकहरुले यसलाई पुन: संसारमा फर्काउन सफल भएभने जिउँदो जीवको जीनलाई क्लोन गरेर सोही जीवलाई निर्माण गर्न पनि सम्भव देखिन्छ । त्यसो भए जीवित जीवलाई नै क्लोन गरेर नयाँ जीवलाई बनाइदा व्यवहारिक तथा नैतिक रुपमा कतिको सम्भव छ ? लोप भएर गएको जीवलाई पुन: जीवन दिएर संसारमा ल्याउदा यसले पारिस्थितिकीय प्रणाली सम्बन्धिका सावलहरु पनि उठ्न सक्ला ।
बेलायती पत्रिका द गार्जियनको अनलाइन संस्करणका अनुसार थ्यालिसिन जीवनको डिएनएलाई क्लोनिङ गर्दै मेलवोर्न विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एन्ड्रिय पाक्स भन्छन्, ‘संसारबाट लोप भएको थ्यालिसिन्सलाई पुन: संसारमा ल्याउन उचित हुन्छ । र, यो व्यवहारिक पनि देखिन्छ ।’
पहिले मानव जातिले यो जीवलाई शिकार गरेर लोप बनायो । यसलाई पुन: पृथ्वीमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि मानव समुदाय कै हो । त्यसैले नीतिगत रुपमा पनि यो जीवलाई संसारमा ल्याउन जरुरी रहेको प्रोफेसर पाक्स बताउँछन् ।
थ्यालिसन जीवलाई पुन: संसारमा ल्याउने विषयलाई लिएर वैज्ञानिकहरुलाई ‘प्लेइङ गड’को संज्ञा दिइएको छ । नेसनल जोग्राफीले कभर हेडलाइन राख्दै भनेको छ,‘लोप भएका जनवारहरुलाई पुनर्जीवन दिन हामी सक्छौँ । के हामी बनाउने त?’
अर्को थरीका मानिसहरुले थ्यालिसनलाई संसारमा ल्याउने वैज्ञानिकलाई ‘प्लेइङ गड’को उपमा दिने विषय ढिला भइसकेको बताउँछन् । केप टाउनका वैज्ञानिकहरुले एक शताब्दीअघि लोप भएर गएको काला प्रजातिका जेब्रालाई पुन: जीवन दिएको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले उक्त जीवको नाम ‘क्वागा’ दिएका छन् । केप टाउनका वैज्ञानिकहरुले निर्माण गरेको क्वागा उही पुरानै जेब्रा भएपनि यसको सबै वंशाणुहरु पूर्ण रुपमा म्याच नभएको द गार्जियनले बताएको छ ।
लोप भएर गएका जीवहरुलाई संसारमा क्लोन तथा जेनेटिक ब्रिडिङको माध्यमबाट नयाँ जीवन दिइएपनि जनावरको व्यवहार, बासस्थान तयार गर्न कठिनाइ हुने धारणाहरु आएका छन् ।
जहाँसम्म थ्यालासिनको कुरा छ, विज्ञानले क्लोनको माध्यमबाट यसलाई बनाउन सकेपनि यो जीवको वंशाणुको स्वास्थ्य, वातवरण तथा हावापानीले असर पार्ने प्रष्ट छ ।
जीवहरुलाई क्लोनको माध्यमबाट बनाएपनि पृथ्वीको वर्तमान वातवरणमा बाँच्न सक्ने सम्भावना नदेखिएको गार्जिन पत्रिकाले लेखेको छ । क्लोनिङ विधिबाट निर्माण गरिएका यस्ता जीवहरुलाई चाहिने बासस्थान र हावापानी २१औँ शताब्दीमा नपाइने भएकाले यिनीहरुको बाँच्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको एकथरी विश्लेषकको मत रहेको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७४ १४:५०
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको शुभकामना प्रधानमन्त्री ओलीलाई
फाल्गुन ११, २०७४ शेखर अधिकारी
काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुभकामना सन्देश पठाएका छन् ।
शुक्रबार नेपाली समय अनुसार दिउँसो अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत उनले यो सन्देश पठाएका हुन्। सन्देशमा नेपालको दिगो विकास र स्थायी सरकारका लागि शुभकामना दिएका छन्।
शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्याकालमा दुई देशबीचको दुईपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुँदै जाने विश्वास लिइएको छ।
सन्देशमा तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएकामा त्यसको सराहना गर्दै जनादेशबाट समावेशी लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिप्रतिको निष्ठा मुखरित भएको बताएका छन् ।
सन्देशमा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुभएको बधाई दिन चाहन्छु।संविधान कार्यान्वयन पछिको बनेको पहिलो सरकारसँग अमेरिकी सरकार साझेदारी गरेर अघि बढ्न चाहन्छ। हामी नेपालको दिगो आर्थिक विकास, भ्रष्टचार नियन्त्रण, शान्ति सुशासनको कामना गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। अमेरिकी जनताको तर्फबाट तपाईंको उत्पादक तथा फलदायी कार्यको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।'
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७४ १४:४८